प्रमोद प्रधान : दुब्लो कायाका बलशाली कवि - Kohalpur Trends
प्रमोद प्रधान : दुब्लो कायाका बलशाली कवि
जीवनका ४० वर्ष प्रमोद प्रधानले दौडधूपमै विताए । राष्ट्रिय समाचार समितिको पत्रकारको हैसियतमा सधैं व्यस्त ‘सेड्युल’मा रहे । त्यही रफ्तारबीच आफ्नो सिर्जनशील लेखनलाई जारी राखे ।
सुन्दा अचम्म लाग्छ, त्यही सक्रिय पत्रकारिताका बीच प्रमोदको नाममा ३२ थान पुस्तक प्रकाशित भए । एक वर्षदेखि सक्रिय पत्रकारिता छाडेका उनी कोरोनाकालदेखि ‘नेपाली यात्रा साहित्यको इतिहास’ लेख्न जोडतोडले लागेका छन् । यसका लागि चाहिने नियात्राका पुस्तक तथा सन्दर्भ-सामग्री भेला पार्ने काम गरिरहेको उनले सुनाए ।
उमेरले ६२ कटेका प्रमोद सक्रियतालाई नै जीवनको अर्को नाम मान्छन् । साहित्य र पत्रकारितामा पाँच दशक अनवरत कलम खियाएका यी लेखक सुनाउँछन्, ‘बिरामी हुँदाबाहेक अरू समय एकदिन पनि यसै बसेको याद छैन ।’
पत्रकारिताको सिलसिलामा २०६० देखि काठमाडौं बसे पनि मनले सधैँ विराटनगर खोजिरहेको प्रमोद सुनाउँछन्
फुर्तिलो तन र उत्साहित मनका प्रमोदको नाममा कविताका चार, अनुसन्धानका आठ तथा बाल साहित्यका २१ थान पुस्तक प्रकाशित छन् । आफ्नो सृजनाकै बलमा उनी एक अब्बल कवि, निबन्धकार र बाल साहित्यकारका रूपमा परिचित छन् ।
यसबाहेक आधा दर्जन साहित्यिक संस्था तथा पत्रकारको प्रशिक्षक भएर काम गरेको अनुभव छ, उनीसँग ।
विरासत विराटनगर !
आकाशवाणी अफिसमा जागिरे पिता डिगमप्रसाद प्रधान र आमा गंगादेवीका कान्छो सन्तान प्रमोद २०१५ असोज १५ गते विराटनगरमा जन्मिए । पत्रकारिताको सिलसिलामा २०६० देखि काठमाडौं बसे पनि मनले सधैं विराटनगर खोजिरहेको उनी सुनाउँछन् ।
सञ्चार क्षेत्रमै काम गर्ने पिता भएकाले प्रमोदको पढाइमा कुनै रोकटोक भएन । पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै उनलाई विद्यालय भर्ना गरियो । पिताको सरुवा हुँदा केही समय जलेश्वर बसे पनि उनी विराटनगरकै विद्यालयमा पढे ।
कक्षा ६ मा पढ्दा बालदिवसका दिन कविता सुनाउने भइसकेका प्रमोेद एसएलसी दिंदासम्म नियमित कविता, निबन्ध लेख्न थालिसकेका थिए ।
त्यसो त बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म दुईवटा चिज समान रहेको उनी सुनाउँछन् । त्यो हो- ‘साहित्य’ र ‘जीउडाल’ ।
‘म केटाकेटीदेखि आजसम्म दुब्लो र छरितो ज्यानकै छु । आजसम्म शरीर भद्दा भएको थाहा छैन’, हलुङ्गो हुँदै प्रमोद सुनाउँछन् ।
२०२९ सालमा एसएलसी दिएपछि उनी व्यवस्थापन (तत्कालीन कमर्स) पढ्न थाले । कमर्समै स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि ६ महिना जुट विकास तथा व्यापार संस्थानमा काम गरे । उनको मनले लेख्न-पढ्न पाउने जागिर खोजिरहेको थियो ।
त्यतिबेला नै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले करार कर्मचारी खोजिरहेको थियो । लेख्न-पढ्न पाउने क्षेत्रमा काम खोजिरहेका प्रमोद राससमा आवद्ध भए ।
राससमा जागिरका लागि अन्तरवार्ता दिंदा जीवनका ३१ वर्ष त्यहीं विताउँला भन्ने नसोचेको उनी सुनाउँछन् । प्रशिक्षार्थी पत्रकार भएर २०३५ सालमा रासस प्रवेश गरेका उनले प्रधानसम्पादक भएर २०६५ फागुनमा अनिवार्य अवकाश लिए ।
राससमा रहँदा एक वर्ष जलेश्वर र डेढ वर्ष नेपालगञ्ज बसे । त्यसबाहेक विराटनगर नै बसेर पत्रकारिता गरे । अहिले भने कोटेश्वर महादेवस्थानमा रहेको ‘सृजना-सृष्टि’ मा बस्दै आएका छन् उनी ।
आफूलाई विराटनगरले सबैथोक दिएको बताउने प्रमोद भनिरहेका हुन्छन्, ‘जहाँ रहे पनि विराटनगरको माटो र आत्मीय सेरोफेरो बिर्सन सक्दिनँ ।’
साहित्य भर्सेस पत्रकारिता
१७ वर्षको उमेरमा आफैंलाई थाहा नभई प्रमोदको नाममा ‘रातभरिका सुस्केराहरू’ कवितासंग्रह प्रकाशित भएछ । कुमारबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौं आएको बेला प्रमोदका डेढ दर्जन कविता र दीपक आलोकका गीत राखेर पत्तै नदिई संग्रह छापिदिएछन्
१७ वर्षको उमेरमा आफैंलाई थाहा नभई प्रमोदको नाममा ‘रातभरिका सुस्केराहरू’ कवितासंग्रह प्रकाशित भएछ । जिल्लाकै कुमारबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौं आएको बेला प्रमोदका डेढ दर्जन कविता र दीपक आलोकका गीत राखेर पत्तै नदिई संग्रह छापिदिएछन् ।
यसभन्दा अगाडि २०२९ फागुन ७ गते विराटनगरमा आयोजित सार्वजनिक सभामा कविता सुनाएर उत्साही बनेका प्रमोदले यसपछि मञ्चमा कहिल्यै पछाडि बस्नुपरेन ।
‘विराटनगरमा कतिपटक कविता सुनाएँ कुनै हिसाब छैन’, उनी सम्झन्छन् ।
साहित्यमा निकै उत्साही भएर लागेका उनका रासस प्रवेशसँगै व्यस्त दिन शुरू भए । राससमा दिउँसोदेखि साँझसम्म कार्यालयमा बस्नुपथ्र्यो । ‘रासस विराटनगरले पूर्वी नेपालको लागि बुलेटिन निकाल्थ्यो’ उनी सुनाउँछन्, ‘त्यहाँ काठमाडौंबाट आएका समाचार छान्नेदेखि आफैं लेख्ने र सम्पादन गर्नेसम्म काम हुन्थ्यो ।’
२०५० पछि उनले पत्रकारिताको प्रशिक्षक भएर पनि बेलाबेला काम गरे । ‘मोरङमा पत्रकारिताको अर्धशताब्दी’ र ‘रासस समाचार आलेख’ सम्पादन गरे ।
तर, कवि मनका प्रमोद सूचनाको पुलिन्दा मात्र बोकेर बसिरहन सकेनन् । जुन गतिमा पत्रकारिता गरे, त्यही गतिमा साहित्य लेखे । सुरूमा कविता लेख्थे त्यसपछि निबन्ध र बाल साहित्यतर्फ उनको कलम फैलियो ।
कवितापछि २०३८ मा उनको समालोचना ‘नेपाली साहित्य : आजका सन्दर्भमा’ तथा २०४० मा ‘केही अध्ययनः केही अनुसन्धान’ प्रकाशित भयो ।
२०४४ सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको बाल साहित्यको कार्यशालामा भाग लिने अवसरले उनको जीवनमा अर्को मोड ल्यायो । तालिम लिएको समयदेखि उनले अहिलेसम्म निरन्तर बाल साहित्य लेख्दै आएका छन् । यसक्रममा बहुल विधाका दुई दर्जन बाल साहित्य पुस्तक प्रकाशित छन् ।
पत्रकारिता र साहित्यको सन्तुलन गर्नुपरे पनि पत्रकारिताले लेखनलाई जग दिएको उनी स्वीकार्छन् । ‘राससमा छापिएको समाचारको सबै जोखिम आफैं लिनुपथ्र्यो’ उनी सुनाउँछन्, ‘यही कारण कसिलो भाषामा सत्य-तथ्य समाचार लेख्ने बानी पर्‍यो ।’
राससमै रहँदा फ्रान्स, चीन, कतारको भ्रमण गर्ने अवसर पाए । त्यसले गर्दा ती देशको कला-साहित्य प्रत्यक्ष बुझ्न पाए । फ्रान्सको विश्वविख्यात समाचार एजेन्सी ‘एएफपी’मा एक महिने पत्रकारिता तालिम लिन पाए ।
राससबाट अवकाश लिएपछि काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने आर्थिक अभियान दैनिकसँग एकदशक आबद्ध भए ।
साहित्यिक अन्वेषक !
साहित्यको शुरूआतदेखि नै प्रमोदमा नयाँ काम गर्ने हुटहुटी थियो । यही सोचिरहेका उनी एकदिन साहित्य लेखेर मात्र नेपाली साहित्यको उन्नयन नहुने निचोडमा पुगे ।
यसपछि नेपाली साहित्यको अभिलेखीकरण र इतिहास संकलन गर्न थाले । साहित्यिक अनुसन्धानका महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा उनका नेपाली यौनकथा, नेपाली निबन्धको इतिहास, नेपाली बाल साहित्यको इतिहास प्रकाशित भए । अहिले ‘नेपाली यात्रा साहित्यको इतिहास’ लेखनको अन्तिम चरणमा छन् ।
साहित्यिक खोजतलास गर्ने आफ्नो रुचिमाथि उनको सदाबहार कथन छ- ‘अपडेट लिन अल्छी मान्दिनँ ।’
युवावस्था विराटनगरमै रहँदा पनि अग्रज स्रष्टाहरूसँग हातेमालो गरेर हिंड्थे । त्यहाँ ‘युवा साहित्यिक परिवार’ गठनदेखि, देवकुमारी थापाका रचना सारिदिनेसम्म काम गरे ।
यसबाहेक केदारमान व्यथित, महानन्द सापकोटा, बीपी कोइरालाले दिएको अटोग्राफ सुरक्षित राखेका छन् उनले । यसैबाट साहित्यको अग्रज पुस्तालाई प्रमोदले गर्ने श्रद्धा झल्कन्छ ।
नेपालमा साहित्यिक अनुसन्धान सरकारी निकायले गर्ने परम्परा छ । व्यक्तिले गर्दा पनि कुनै निकायबाट विद्वत्वृत्ति लिने चलन छ । तर बाल साहित्य र निबन्धको इतिहास व्यक्तिगत प्रयासमा प्रकाशित गरेको उनी सुनाउँछन् ।
साहित्यकारबाहेक रसिलो, हँसिलो र फुर्तिलो रहनु प्रमोदको परिचय हो । नेवारी संस्कारमा हुर्किए पनि रक्सी र चुरोटको अम्मल छैन । परिचितहरू वर्षौंदेखि उनलाई उही सदाबहार ठाँटमा देखेको बताउँछन् ।
कवि शैलेन्द्र साकार प्रमोदलाई आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्ने वचनबद्ध स्रष्टा मान्छन् । यस्तै नाटककार अशेष मल्ल प्रमोदलाई शालीन व्यक्तित्वका अध्ययनशील स्रष्टा मान्छन् । अशेष भन्छन्, ‘सृजना गर्ने मात्र नभई नेपाली साहित्यलाई मिहिन अध्ययन गरी समीक्षा गर्ने क्षमता प्रमोदमा छ ।’
साहित्यिक ग्राफमा प्रमोदको रेखा कहिल्यै वक्र भएन । बरु प्रत्येक वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गरेर उनी साहित्यवृत्तलाई चकित बनाइरहन्छन् ।
यी सबै काम गर्न कहाँबाट उत्साह आउँछ ? नयाँ पुस्ताले उनलाई सोधिरहेको हुन्छ ।
‘रुचिको काममा लाग्यो भने थकाइ नलाग्ने रहेछ’, जवाफमा प्रमोद यस्तै भनिरहेका हुन्छन् । अनि कहिल्यै निष्त्रिmय जीवन नबाँच्ने अठोटका साथ साहित्यिक कर्ममा होमिइरहन्छन् ।
उनले जीवन र कवितालाई दाँजेर दुई दशकअघि लेखेको कविता-
जीवन कविता जस्तो किन हुँदैन !
म फूललाई हेर्छु
र, फूलसँग जीवनलाई दाँज्छु
मभित्र एउटा प्रश्न उम्रन्छ-
जीवन फूल जस्तो सुन्दर किन छैन ?
नदी प्रवाहपूर्ण वेगमा बगिरहेको छ
म जीवनलाई त्यही नदी जस्तै बाँचेको हेर्न खोज्छुÙ
तर, मभित्र एउटा विरोध बोल्छ-
जीवन नदी जस्तै प्रवाहमय किन छैन ?
मानिसका अनुहारमा अनेक पीडा बोलिरहेछ
जीवन पीडित अनुहारझैं असहाय बाँचिरहेछ
हुन त जीवन उज्यालो दीपशिखा हुनुपर्ने हो
म आफैंसँग बहस गरिरहेछु-
जीवन दीपशिखा झैं उज्यालो किन छैन ?
म आफैँसँग प्रश्न गरिरहेछु-
जीवन फूल जस्तै सुन्दर किन छैन ?
म आफैंसँग बहस गरिरहेछु
जीवन यात्रा जस्तै रोमाञ्चकारी किन छैन !
जीवन संगीत जस्तै सुरिलो किन छैन !
Previous Previous post: कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बस्दै
Next Next post: ‘देखेको सपनामा बाँच्न पाएको छु’